Izibikezelo Zango-2014 Zamathrendi Ewebhu Yeselula | Martech Zone
2014 Izibikezelo for Mobile Web Amathrendi
ULwesihlanu, February 21, 2014 ULwesihlanu, February 21, 2014 Douglas Karr
Uma u-2013 bekungunyaka wokuqukethwe neselula, mhlawumbe lo nyaka unyaka wokuqukethwe. Lokho wukuthi, ukubeka okuqukethwe ngokomzimba phambi komsebenzisi ukuthi bakudinga nini futhi kuphi. Asikhulumi nje ngokusesha, siphinde sikhulume ngokuthumela imiyalezo nokuhlanganiswa komuntu wesithathu.
Le infographic evela kumaNetbiscuits yenza lokho kubikezela. Ukwamukelwa kwe-Smartphone kuyaqhubeka nokwanda, kunikela ngamakhono e-geolocation aqine nokwanda kwenani lamadivayisi axhunyiwe ukuthola nokuxhumana nawo.
Singalindela ukubona isidingo esikhulu sokuhlangenwe nakho okwenziwe ngokwezifiso ezibeka phambili umongo womsebenzisi ngqo. Njengenye yezinselelo ezinkulu ezibhekene nemikhiqizo ngonyaka we-2014, le nhlangano eyodwa uqobo izonyakazisa ukuthi izinhlangano zidinga ukuxhumana kanjani namakhasimende azo. Amabhizinisi awasekho enkampanini kuphela. Bazijwayeza abantu abakhetha ukusebenzisana nayo, futhi ngasekupheleni kuka-2014, lokhu kuzodinga ukuhlangana kabusha kakhulu kunanini ngaphambili.
Landa lo mbiko namuhla ukufunda izincomo zeNetbiscuit zokuzibandakanya okusebenzayo kwe-multi-channel web.
Tags: umongoukuqaphela komongoI-Marketing InfographicsUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiamanethi
Amaqembu we-LinkedIn Wokuphumelela Kokuthengisa